Cadaadisyo Isa Soo Taraya Ayaa Soo wajahay Saraakiisha dalka Iiraan | Marsa News
Cadaadisyo Isa Soo Taraya Ayaa Soo wajahay Saraakiisha dalka Iiraan
January 13, 2020 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Hogaamiyayaasha Iiran ayaay soo gaadhayaan baaqyo isa soo taraya oo ku saabsan in shaqada laga eryo saraakiil sar sare, ka dib markii diyaaradii ay soo rideen ciidamada wadanka iran eelaga lahaa wadanka Ukrain, islamarkana ay ku dhinteen guud ahaan dadkii saarnaa oo tiradoodu dhamayd 180 qof.
Kumanaan dibad baxayaal ah ayaa dalbanaya in isla xisaabtan la helo ka dib markii ay milatarigu qirteen in si aan ula kac ahayn ay u soo rideen diyaarada rakaabka siday.
Dowladda Iraan ayaa wixii sabtidii ka horeeyay dafiraysay in ay masuul ka ahayd burburka diyaaradaasi.
Dibad baxyadan ayaa ka socda bannaanka ugu yaraan labo jaamacadood, iyadoo la sheegayo in booliiskuna uu u adeegsaday dibad-baxayaashaasi sunta dadka kaga ilmeysiisa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka taageero ugu muujiyay dibadbaxayaasha.
Iran ayaa shalay qiratay inay “si kama` ah” u soo riday diyaaradda, saddex maalmood kaddib burburkii diyaaradda oo ay ku dhinteen dhammaan 176 qof oo saarnaa iyo afar qof oo shaqaalaha diyaarada ahaa.
Duullimaadka Ukraine International Airlines ee PS752, ayaa Arbacadii lagu soo riday meel u dhow garoonka Imam Khomeini ee magaalada Tehran, wax yar kaddib markii ay halkaasi ka duushay, iyo saacado yar un kaddib markii ay Iiraan gantaallo ku tuurtay labo saldhig oo ciidamada Mareykanku ay ku leeyihiin Ciraaq.
“Iiraan waxay soo ridday diyaaraddii Ukraine”
Diyaaraddii burburtay: Canada iyo Ukraine oo Iiraan ka dalbaday caddaalad
Weerarradaas ayaa waxay Iiraan uga jawaabeysay dilkii Mareykanka uu u geystay Qasem Soleimani oo lafdhabar u ahaa milatariga Iiraan, kaas oo ku dhintay weerar ka dhacay Baghdad 3-dii January.
Dad u dhashay Iiraan, Canada, Ukraine, UK, Afghanistan iyo Jarmalka ayaa ku dhintay diyaaradda.
Maxaa ka dhacay halka ay dibadbaxyadu ka socdaan?
Ardayda ayaa isugu soo baxay ugu yaraan bannaanka labo jaamacadood, jaamacadaha Sharif iyo Amir Kabir, sida ay wararku sheegayaan, iyadoo markii hore ay ujeeddadu ahayd inay xushmad u muujiyaan dadkii ku dhintay diyaaradda, balse Dibadbaxyada ayaa marqudha is beddalay xalay.
Ilaa 1,000 qof ayaa adeegsanayay hal ku dhigyo ka dhan ah hoggaamiyeyaasha Iiraan iyagoo sidoo kale jeexjeexay sawirrada Soleimani.
Sidee ayuu maamulka Iiraan u qirtay?
Muddo saddex maalmood ah, Iran ayaa beenineysay wararka sheegaya in gantaalladeeda ay soo rideen diyaaradda, iyadoo afhayeen u hadlay dowladda uu ku eedeeyay dalalka Galbeedka inay been sheegayaan.
Balse shalay subixii, ayaa warsaxaafadeed laga aqriyay telefishinka dalkaas waxay Iiraan ku qiratay inay diyaaradda soo ridday.
Dadkii masuulka ka ahaa ayaa lala xisaabtami doonaa, sida bayaan laga baahiyay telefishinka lagu sheegay.
Sidee ayay Canada iyo Ukraine uga jawaabeen?
Madaxweynaha Ukraine Volodomyr Zelensky iyo Ra`iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa shalay la hadlay Mr Rouhani.
Mr Trudeau ayaa sheegay inuu careysan yahay wuxuuna Mr Rouhani u sheegay inay qasab tahay in la sameeyo baaritaan buuxa.
Mr Trudeau ayaa sheegay: “in Canada aanay nasan doonin ilaa laga helo isla xisaabtan iyo caddaalad… way murugeysan yihiin, way careysan yihiin wayna tiiraanyeysan yihiin waxayna doonayaan jawaab.”
Mr Zelensky, oo dalbaday raalligelin iyo magdhow ayaa sheegay in Mr Rouhani uu u xaqiijiyay in “Dhammaan dadkii ku lug lahaa musiibadan la horkeeni doono caddaaladda”.